Koox hubeysan oo shan macalin dugsi qur’aan ku dilay Shabeellaha Dhexe | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Koox hubeysan oo shan macalin dugsi qur’aan ku dilay Shabeellaha Dhexe
Koox hubeysan oo shan macalin dugsi qur’aan ku dilay Shabeellaha Dhexe
Wararka naga soo gaaraya degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ay sheegayaan in maleeshiyaad hubeysan ay shan macalin Dugsi quraan ku dileen tuulada Burdheera ama Koogaar oo qiyaastii 50km u jirta degmadaas.
Maleeshiyaadka hubeysnaa ayaa rasaas ku furay macalimiinta oo xiligaas ku jiray subac ama quraan akhris aroornimadii hore ee saaka, iyaga oo goobta ka baxsaday.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in macalimiinta ay salaada subax kahor bilaabay subaca, salaada ka dibna markale oo ay u laabteen subaca, hayeeshee ay la kulmeen weerarkaan ay ku dhinteen qaar kamid ah Macalimiinta Subaca ku jiray.
Majirto cid ilaa iyo hadda loo aaneynayo inay ka dambeeysay falkaasi iyo sababta ay u dileen macalimiinta subaca ku jiray, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in loo dilay sababo la xirira aanooyin qabiil.
Macalimiinta weerarkaasi lagu dilay ee magacyadooda la helay ayaa waxaa ay kala yihiin.
1. Sheekh Daahir Xasan Cali Dheere.
2. Macalin Maxamuud Canbuure.
3. Macalin Maxamed Xuseen Axmed Cadaawe.
4. Macalin Muqtaar Cabdullaahi Cilmi.
5. Ow Muxumud Xasan Cali Dheere.